नियन्त्रण: Use arrow key to move. Trolls 3D Maze Adventure Game
खेल्नु: 24,519 ट्याग: trolls, trolls games, maze games, साहसिक खेल, trolls 2016, film games
Winx क्लब: गरौं आफ्नो पखेटा चमक
अब यो सबै नयाँ समुद्र तट मा खेल खेल्न र आफ्नो पखेटा चम्कोस्!
दुई एल्फ भाइहरूले एक जोडी जादू Kingdom.They बाँचिरहेका छौं जादुई abilities.The को एक किसिम जन्म गर्दै जादू राज्यको राजा अचानक एक अनौठो disease.All डाक्टर यो अनौठो disease.At यो समय निको पार्न सक्नुहुन्छ पायो, तिनीहरूले सुने एक
blazing elves प्रदर्शन
Blazing - को मुख्य भूमि मा सिर्जना पिता, Angelis यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली जादू शक्ति छ, र भविष्यवाणी आगो एल्फ केटी संग एक प्राकृतिक क्षमता संपन्न जादू मिशन को स्रोत को रक्षा, जादू को रहस्यमय स्रोत बायाँ। यो
dastardly फोहोर व्यवहार Spongebob
यो खेल Spongebob दुष्ट चाल-वा-व्यवहार राक्षस बनाम। अर्डर आफ्नो स्वास्थ्य कम तर तपाईं प्राप्त आफ्नो रातो क्यान्डी द्वारा मारा छैन निश्चित गर्न मा उसलाई केही हरियो क्यान्डी फेंक।
यो साहसिक भ्रमण मा, Spongebob नयाँ गुफा पत्ता। सहायता Spongebob आफ्नो मिशन पास र सबै राक्षस नाश।
Spongebob helicopter.Help संग उडान loves उहाँलाई आफ्नो उडान मार्ग समाप्त र सबै ऊर्जा तल गोली।
समुद्र अन्तर्गत Spongebob साहसिक
Patric राक्षस द्वारा गहिरो समुद्र मा पक्राउ परेका थिए, चाँडै उद्धार गर्न आवश्यक छ। Spongebob समुद्र राक्षस देखि पैट्रिक सुरक्षित गर्ने निर्णय गरे। तपाईं Spongebob आफ्नो Patric उद्धार गर्न पूर्ण साहसिक मदत गर्न सक्छ।
बब मार्ग: नरक देखि उम्कन
बब तरिका: नरक देखि भागन कार्य छैन जहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक एक मंच खेल हो। बब राम्रो शैतानको छ, तर त्यो एक कष्टप्रद काम छ। उहाँले यो घृणा, र उहाँले आफ्नो मुख्य घृणा गर्छ। त्यसैले, त्यो कहाँ जान सक्नुहुन्छ? बब गर्न ... आकाश एउटा यात्रा सुरु हुनेछ! वाई के
Spongebob संग समुद्र साहसिक
Spongebob 14 भन्दा बढी स्तर द्वारा रोमाञ्चक र यो खेल मा सागर को खतरनाक पत्ता लगाउन। Spongebob सबै वस्तु सङ्कलन एक स्कोर प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ।
उहाँले समाप्त लाभा को एक शो द्वारा एकदम अवरोध संग fraught खतरनाक र संसार मा प्ले हुँदा मा खेल कार्य र साहसिक आरोही लावा यो बच्चा आफ्नो प्रेमिका को प्रेम को शंकास्पद थियो। अब तपाईं आफ्नो केटी पाउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले टी जान हुनेछ
यो जाडो छ, त्यसैले यो लोखर्के को जाडो मार्फत प्राप्त गर्न पर्याप्त acorns फेला पर्छ। तपाईं उसलाई धेरै acorns पाउन मदत गर्न सक्छ?
आफ्नो शहर अब हावी र जनसंख्या संग बर्बरता को सबै प्रकारको गरिरहेका छन् जो भयानक गुंडे द्वारा आक्रमण भएको थियो। एक निन्जा जस्तै माथि पोशाक र यी डाकुओं को एक मार, तर तपाईँले छाया लागि कार्य र जब खराब मान्छे प्रहार पर्छ होसियार घ
घातक venom 3
यो विद्रोही चुपके हत्यारा एक घातक उत्परिवर्ती हतियार सिर्जना मा दुष्ट साम्राज्य सेट तल लिन फिर्ता छ। हामी कहाँ हामी दुनिया मा आफ्नो प्रभुत्व एक अनौठो अस्तित्व र Intel पत्ता लगाउन जहाँ पहिलो खेलमा छोडेनन् लिन। यो खेलमा हामी नयाँ Stea छ
दाऊदले विला डरलाग्दो सपना
सबै सँगै कौशल खेलाडी बार्सिलोना दाऊदको Villa, ?? संग माथि घातक लाभा मच्चिरहेको ज्वालामुखी उम्कन गर्न मञ्चहरूमा चढाई गर्दा। Salta र चुचुराहरूको लिन।
नायक खतरनाक शत्रुहरूले गार्ड सहित एक महल मार्फत आफ्नो बाटो बनाउनु पर्दछ। आफ्नो मात्र हतियार एक तरवार छ र एक ढाल को सुरक्षा अन्तर्गत जान्छ। सबै पर्दाका पूरा गर्नुहोस्।
क्रिसमस केटी फड्को
उनको अवरोध प्याकेजहरूमा सङ्कलन र सान्ता प्राप्त पछिल्लो यस केटी कूद मद्दत गर्नुहोस्। कि कठिनाई मा वृद्धि धेरै स्तर छ, जो यो रमाइलो कौशल बालिका लागि खेल आनन्द लिनुहोस्। केटी जम्प बनाउन र उनको अगाडि सार्न तपाईंको तीर कुञ्जीहरू प्रयोग गर्न मारा स्पेस बार
पहिलो सम्पर्क spaceport
तपाईं स्पेस मा पठाएको हुनेछ, तर अनौठो कुरा के तपाईं spaceship उन्मुक्ति तरिका हुन्छ र तपाईंले आफ्नो spaceship हेर्न अर्को बाटो फेला पार्न आवश्यक छ, तर त्यहाँ दुष्ट राक्षस, Spaceman शुभकामना छ!
तपाईं एक spaceship खोपडी आकार ड्राइभिङ छन् कल्पना गर्नुहोस्। यस यात्रामा तपाईंलाई धेरै अनौठो वस्तुहरु सामना र धेरै अन्य आफ्नो जहाज, डज नष्ट र ती सबै गोली गर्न चाहन्छु।
यो spacemen स्पेस उहाँको आफै यात्रा। आफ्नो बाटोमा उहाँले नयाँ ग्रह फेला परेन। अब उहाँले सारा ग्रह जाँच gonna छ। यो ग्रह मा दुष्ट प्राणीहरूको लागि बाहिर हेर्नुहोस्।
को जंगल मा वरिपरि चलान, आफ्नो सबै शत्रुलाई तल र तपाईं पछि रगत को पूल मा गोली।
विदेशी आक्रमण बन्द stave र मानव जाति बचत गर्न हतियार प्रयोग गर्नुहोस्।